Jery taratra… herinandro: hipaka any ifotony amin’izay… | NewsMada
Nifarana tanteraka, ny 15 mey, ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana. 25 388 ny birao fandatsaham-bato amin’ny fari-pifidianana 119, ary 10 302 194 ny isan’ny mpifidy, araka ny fanazavan’ny Ceni. Izay lisitra izay no hampiasaina amin’ny fifidianana solombavambahoaka sy ny fifidianana kaominaly hatao amin’ity taona ity.
Nilaza ny eo anivon’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena fa famitaham-bahoaka ny fanaovana petadrindrina tsy misy afa-tsy ny sary sy ny anaran’ny lohalisitra amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Lisitra no fidina ka tokony ho ao avokoa ny mpiray lisitra manontolo. Mila mitandrina ny mpifidy tsy ho voafitaka.
Nalefan’ny Bianco eny amin’ny fitsarana manokana misahana ny kolikoly (Pac) ny raharaha fandraisan’ireo depiote 79 kolikoly 50 tapitrisa Ar isan’olona teny Ivato, ny 31 marsa 2018, ho fampandaniana ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana. Efa nitory izany ireo depiote 73, nitarika ny hetsika teny amin’ny kianjan’ny 13 mey, ny 21 avrily 2018.
Navoakan’ny HCC amin’ny “Sit-web”-ny ny torolalana momba ny fifanolanana amin’ny fifidianana depiote 2019. Anisan’izany, ohatra, ny heloka sy ny sazy mifandraika amin’ny fampielezan-kevitra, araka ny And. 218 sy ny manaraka amin’ny lalàna fehizoro lah. 2018-008, ny 11 mey 2018. Misy ny lamandy sy/na fitanana am-ponja.
Nilaza ny Ceni fa tapitra ny fe-potoana fampitandremana amin’ny fametahana petadrindrina tsy ara-dalàna. Raha tsy miala ao anatin’ny 6 ora izany, ny Ceni no hanaisotra azy ary hampandoa sazy vola ireo kandidà. Mety hiafara amin’ny fanalana an-daharana kandidà ny tsy fanarahan-dalàna aorian’ny fampitandremana.
Nivoaka ny didy hitsivolana fanitsiana ny lalàna mifehy ny tetibola, taona 2019, mifantoka betsaka amin’ny fanorenana fotodrafitrasa, araka ny veliranon’ny filohan’ny Repoblika ao amin’ny IEM. Eo koa ny fandrosoana ny isam-paritra. Mba hipaka any amin’ny vahoaka ifotony amin’izay ny hoe fampandrosoana?